Ndi oru mgbasa ozi na ndi dere akwukwo ma ha na ere akuko PsyOp dika ha na egosi TV? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 Ka 2019	• 11 Comments
Onye ọ bụla nke soro ikpe Anne Faber ma hụ akwụkwọ akụkọ Julie van Espen n'oge na-adịbeghị anya na akụkọ ahụ aghaghị ịchọpụta na ọnọdụ dị otú ahụ ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na anyị agbaso mgbasa ozi, akụkọ a bụ eziokwu. Anyị nwere ihe oyiyi na-akwado eziokwu ahụ ma ọ bụghị nanị na anyị hụrụ ezinụlọ na ndị enyi, mana anyị na-ahụkwa foto na vidiyo nke ndị isi, nke pụtara na ọ pụghị ịbụ ihe ọzọ karịa eziokwu ahụ. N'isiokwu dị n'okpuru ebe a, ana m agbalị ịkọwa ihe mere ị ka nwere ike iji tụọ isi gị.
Mbụ okwu mkpirikpi.
Ndị agha Troll
Anyị anụla banyere ụlọ ọrụ 'troll factory' ma ọ bụ 'agha agha', ma ha nọ na Russia (mgbasa ozi na-agwa anyị). Otú ọ dị, ahụmahụ m bụ na ndị agha ndị agha ahụ bụ na Netherlands. Ịgakwaghị ahụ nke ahụ nke ọma na nzaghachi m, n'ihi na m na-enyo ha site na iji nyocha nke onwe. Ka anyị kwuo na mgbe gọọmentị na-arụ ọrụ na PsyOp (arụmọrụ na-arụ ọrụ uche) ma na-ere ihe ịga nke ọma ndị a 'gafee ókèala' (n'ihi na ọ gbanwere nke ọma na obodo nke ha), ị chọrọ nnukwu ìgwè ndị agha iji nweta nzaghachi dị iche iche na mkparịta ụka n'ịntanetị mgbasa ozi "iji nyochaa". Ha nwere ike izipu mkparịta ụka ahụ site na nkwupụta dịka "Amaara m ya" ma ọ bụ "ya na enyi m nọ n'ọfịs" na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ndị mmadụ adịghị achọpụta nke profaịlụ Facebook n'azụ nzaghachi. Ọ bụghị mgbe nile ka ha ga-abụ profaịlụ adịgboroja; nke ahụ pụkwara ịbụ ndị dị adị n'ezie.
Ị nwere ike ịnụ banyere okwu ahụ bụ Inoffizieller Mitarbeiter. N'okpuru Stasi nke East German GDR, ndị ahụ bụ ndị dị jụụ, ndị ọrụ nzuzo na, dịka ọmụmaatụ, lekwasịrị ndị agbata obi ha anya. A kọrọ na otu n'ime iri ise na oge ahụ. I nwere ike ikwere na ihe a na-apụ n'anya ụwa mgbe ejikọtara East na West Germany. Eji m n'aka nke ahụ. Anaghị m achị - n'ihi na ahụmahụ m na azịza niile n'ime afọ ole na ole - na Netherlands nwere nnukwu ìgwè ndị agha na-akwado ịkwado mkparịta ụka maka mgbasa ozi iji kwado akwukwo omume.
Onye isi oru
Ị maara na John de Mol nwere ANP? Ị maara otú John de Mol si baa ọgaranya? N'ụzọ dị ukwuu site na ire ere TV nke ọma. Ị mara ha site na ndị na-egosi dị ka Holland si Got Talent. A na-anwale ha na nde ndị Dutch ole na ole ahụ ma ọ bụrụ na ha ejide ya, a na-ere ha n'ókèala dị ka echiche na arụpụtara nke ọma. N'oge nke Zaanse vloggersrel, enwere m ike iji anya nke uche (maka ihe oyiyi enyere nke enyi nke bi n'ógbè) otú Powned siri sie ike na-arụ ọrụ na-eduzi ndị na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bịara doo anya na a na-eduzi. O dokwara anya na, dịka ọmụmaatụ, njide jidere ogologo oge, n'ihi na onye igwefoto aghaghị ịga ije n'ọnọdụ ziri ezi. N'oge na-adịghị anya, ndị ụkọchukwu na-arụrịta ụka n'ihu igwefoto nọ na-achị ọchị ma na-ewere onwe ha na ibe ha. A na-edozi Zaanse vloggersrel kpamkpam ma dezie ya. Ihe oyiyi ndị ahụ ị nwere ike ebe a hụ ọzọ.
Enweela m ọtụtụ ugboro iji kwurịta usoro ndị nwere ike ịmepụta mkpụrụ edemede miri emi. Ọ ga-amasị m ikwughachi ya maka ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ. A na-emepụta ihe omimi site na GAN software. Nke a bụ ngwanrọ nwere ọgụgụ isi nke, dabere na usoro AI ọtụtụ na netwọk, na-emepụta ihe odide nke ihe ọ bụla. AI bụ Bekee maka ọgụgụ isi; ihe pụtara maka ọgụgụ isi. Ebe ọzọ AI na-enyocha ihe oyiyi nke netwọk mbụ kere ma jụ ma ọ bụ kwado ha. Site na ime nke a na usoro, ihe odide a na-aghọkwu ihe ọ bụla na nzọụkwụ ọ bụla, ka i wee nwee ike mechaa nye ndị mmadụ na-eme ihe n'eziokwu bụ ndị yiri ndị nkịtị (onye ị ga-ezute n'okporo ámá). Ruo ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ enwewo ike ịmepụta ihe odide ndị na-abụghị ndị dị na ya, onye na-emepụta ihe ngosi nke esemokwu NVIDIA achọpụtawo na ị nwere ike ime nke a ugbu a na egwuregwu PC dị mma (lee ebe a). Ụlọ ọrụ ahụ (NVIDIA) nwere ike ịmepụta gburugburu ebe obibi. Lelee vidio dị n'okpuru ebe a wee gaa n'ihu ịgụ.
Ugbu a, e nwekwara ngwanrọ na ahịa nke ị nwere ike ịjụ ajụjụ ọnụ n'azụ kamera weebụ na PC mgbe niile ma tinye ihu abụọ na olu onye ọzọ banyere ya. A na-eme nke a n'oge na-enweghị ihe ọ bụla. Ị nwere ike ịhụ nke a n'okpuru (gụkwuo n'okpuru vidiyo).
Ọ bụrụ na ị gbakwunye ihe niile a dị na ọnụ, ị nwere ike ịmepụta onye ọbụla ịchọrọ, ị nwekwara ike ịmepụta akụkọ ihe mere eme ma mee ka ya niile yie ka ọ dị adị. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta vidiyo nke Anne Faber site n'afọ ole na ole gara aga, ya na nna ya nọ n'ụgbọala, ma mee ka onye ọ bụla kwere na nke a dị adị. Ma obu bu ma eleghi anya obu okwu efu, ma obu ihe mere n'eme? Ị nwere ike ịlele ya? Anyị nwere ike inwe obi ike na gọọmentị na mgbasa ozi anaghị emepụta akụkọ ụgha ma anyị nwere ike ikwere na ọrụ nzuzo bụ ịmepụta usoro iji chọpụta ihe ndị dị omimi, ma ọ bụ na ha abụghị ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ n'onwe ha?
Ya mere, ọ bụrụ na John de Mol, onye otu nde mmadụ, onye na-emepụta TV na onye nwe ANP (General Dutch Press Agency) nwere ike inwe ihe niile, ya mere, a ga - ewere ya na ọ ga - enwe ike ịmepụta ihe, mgbe ahụ, anyị kwesịrị ịchị ọchị mgbe mmadụ guzo ọtọ ị na-ekwu na enwere ike ime ka anyị ghọgbuo? Enwekwara m ihe ugboro ugboro (n'ihi na anaghị m egosi na ngosi akwado ya na ihe anya anyị ghọgburu). O nwere ike ịbụ na ọ dị njọ nke na a na-ere akwụkwọ dị otú ahụ dị ka nnukwu TV, na-ere ya na mba ọzọ, n'ihi na ọ pụtara na ọ ga-aga nke ọma?
Ntak emi mmọ ẹkenamde?
"Ee, ma Vrijland, ọ ga-enwe ihe mgbaru ọsọ iji ghọgbuo ndị mmadụ n'ụba dị otú ahụ? Ònye na-eme ihe dị otú ahụ?"Mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịṅa ntị na iwu ọhụrụ ndị a na-arụ ọrụ, n'oge na-adịghị anya mgbe ihe omume dị otú ahụ dị ka ikpe Anne Faber. N'ọtụtụ isiokwu m kọwara ihe kpatara ikpe Anne Faber (nke Michael P. ji bụrụ onye na-eme ihe) bụ ihe yiri ka ọ bụ PsyOp (ọrụ uche). Ọrụ iji megharịa iwu. Iwu nke ndi mmadu agaghi anabata ma obu ihe ndi ozo. Maka nke a, ọ ghaghị ịbụrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị.
Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta
Ka m malite site na ịkọwa ọzọ otú mgbasa ozi nwere ike isi kpọọ egwuregwu egwuregwu a na ihe Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta nchịkọta bụ na o yiri ka a ga-etinye oge na oge ọzọ ma hụ ihe anyị na-ahụ nke a na ikpe Julie van Espen na Steve B..
Kedu ihe bụ isi ahụ mgbe ahụ Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta? Ihe ị dị ka gọọmentị na-eme bụ: Ịmepụtara nsogbu mmekọrịta mmadụ na nnukwu mmetụta (nsogbu) na - eme ka ndị mmadụ nwee obi ike na mmetụta uche (mmeghachi omume) ma nwee ike imejuputa iwu ohuru na uzo ga adighi anabata ya (ngwọta). Mgbe ahụ, ị ​​kwụnye na okwu ndị dị ka "Gọọmentị adabaghị na nchedo ọha mmadụ nwere ike ịtụ anya na ya", Dịka onye ozi Netherlands bụ Sander Dekker si bịa n'oge na-adịbeghị anya.
Ị nwere ike ịrụ ọrụ na usoro ndị a kọwara n'elu iji mepụta nsogbu dị otú ahụ. N'ezie, ọ pụtara na ịnweghị ike ịnwale ajụjụ ọ bụla, okwu ma ọ bụ ihe oyiyi ọ bụla maka eziokwu. Ya mere i nweghi ike ikwere anya gi. Television na mgbasa ozi ndị ọzọ nwere ike ịnweta ume n'ime ndụ na-adịghị adị. Ọbụna ma ọ bụrụ na i chere na edere ya na telifon ma ọ bụrụ na ọ na-abịa site na igwefoto nchedo, ị gaghị enwe ike ijide n'aka na ọ bụ ezigbo. Ihe niile nwere ike ime, ọ dịghịkwa ihe na-agaghị ekwe omume n'ụwa mgbasa ozi. Ị ghaghị ịṅa ntị mgbe niile ngwọta na-esote obere oge mgbe ihe omume dị otú ahụ dị.
Ajụjụ dị na Anne Faber ikpe
"Ma, Vrijland, igbu ọchụ nke Anne Faber nwere ike ịme ya n'ezie?"Ee, ị nwere ike, naanị na usoro nke isiokwu m dere banyere nke ahụ (lee ebe a) O meela ka o doo anya na ọ pụtawo na ọ bụ akụkọ a na-adịghị atụ anya ya. Kedu nwa agbọghọ na-eji ịnyịnya ígwè amalite iji oké ifufe buru amụma wee malite ịmalite ije ụkwụ n'okporo ụzọ ANWB na ihe kpatara ejiji uwe ya na 3 October ma were ụbọchị 6 maka mmekọrịta DNA na Michael Panhuis ka a ghọta? Nke ahụ abụghị eziokwu. NFI nwere ike ime nke ahụ ime na 6 awa. Gini mere Michael ji gbasaa ihe nile achotara na ihe banyere ya? agba ọsọ scooter na Anne Faber n'azụ? Ntak emi ẹkebụkde enye ke akpa ndien ekem ọtọn̄ọ ndiwot ka e lie ya? Ntak emi ẹkedọhọde ke n̄kukpọkidem ye utọpidem egosighi ke ikpe ikpe? Ọ dị mma, na e nweela ọtụtụ ihe dị iche iche na nke a, ma, ọ bụ n'ihi na ị hụla ihe oyiyi nke nne na nna nwere mmetụta uche, ị kwenyere na ya. Akụkọ na-akpali akpali na akpọrọ akụ (nsogbu) mmetụta uche metụrụ ndị mmadụ aka n'ụzọ dị ukwuu ma wee ghọọ mmeghachi omume iji nweta iwu ọhụrụ (ngwọta). Nwa gị nwere ike ime nke a ugbu a mee onwe gị kwa:
Dekker na-akpọ ya 'adịghị mma' nke na-enyo enyo ndị chọrọ ọgwụgwọ na TBS nke nwere ike ịgbanahụ site n'ịkwado nchọpụta na nke a agaghịzi eme.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-achọpụta nyocha nke ihe ize ndụ na nchọpụta mpụ. Ọ bụrụ na ị na-enye ndị nnwere onwe ohere ka ha dịkwuo mkpa.
Na nkenke: nchọpụta n'ime ọnọdụ uche na-aghọ ihe a chọrọ n'aka na mgbe ahụ anyị na-eche banyere Michael Panhuis na ya mere anyị kwenyesiri ike na ọ dị mkpa. Eziokwu ahụ maka ọtụtụ ndị amaala a nwere ike ịpụta na a ga-etinye ha na nchịkwa nke steeti maka ndụ (ma mebie ihe niile ruuru mmadu), mgbe ha nyochachara ya, ọ pụtara na onye ọ bụla chọrọ ịkọ ọdịmma nke uche ga-eme nwere ike zoo ya. Ya mere, ndị uweojii ka ukwuu.
Ihe mmetụta uche
Ihe gbasara Anne Faber na Michael P. ya mere dika oge elekere anya n'elu ikuku, o siri ike na agbanyeghi ihe omuma ya na ndi oru ikpe, ndi oru mgbasa ozi na ndi ochichi ka ha wee tinye iwu ohuru. ndị mmadụ agaghị anabata ya. Site n'ịkpọ ndị mmadụ oké mmetụta, ha kwenyesiri ike na ha ga-akwado mgbanwe dị otú a, n'ihi na onye ọ bụla na-ejikọ ya na anụ ọhịa Michael P.
Usoro mgbasa ozi ekwenyela na anyị niile ga-abụ eziokwu, ma anyị agaghị enwe ike ịlele onwe anyị ma anyị ga-eche na anyị anaghị egwu usoro Hollywood. Ihe si na ya pụta bu na enwere ike wepu ndi mmadu n'enwegh ihe kpatara ya ma wepu ha na nmehie ha n'oge ha nile, n'ihi na iwu adighizi echebe ha.
Gini banyere Julie van Espen na Steve B.?
Ihe ozugbo kwupụtara na Steve B. nkọwa bụ ihe odide na-esonụ vrt.be:
Dị ka ozi anyị si kwuo, ihe oyiyi a ga-adọrọ mmasị na nyocha ahụ tupu e kesaa ha dị ka akụkọ nyocha (lee foto n'okpuru, hapụrụ foto foto-foto - foto oyiyi foto mbụ). Ndị uweojii ga-amata ozugbo na ọ bụghị naanị "onye akaebe".
Gịnị mere ndị uweojii ga - eji "tụfuo nkata nke Steve B. na - ebu" na - achọ nchọpụta ahụ? Ị nwere ike ikwu na ha mere ya ka ha wee ghara igbu ndị àmà ọ bụla, ma ị nwekwara ike ikwu na ha amaworị na Steve B. nwere ike jikọọ na Julie na-efu n'ihi na ọ na-ejegharị na nkata ya . Ị nwekwara ike ịsị: ebe a anyị na-ahụ ihe akaebe dị ndụ nke nwere ike ịme ihe oyiyi dị mfe ma hụkwa ebe a na-egosi na nke a na-eme.
Ọbụna ihe kachasị mma bụ na ọ bụghị nna nke onye ahụ kwuru okwu ahụ, ma nna nna. Na Anne Faber ikpe anyị hụrụ nwanne nna ya bụ onye mbụ na-ekwu okwu. Naanị mgbe e mesịrị ka nne na nna malitere ịpụta. Anọ m na-akọwapụta nhọrọ nke ndị miri emi na ndị na-eme ihe nkiri, bụ ebe a pụrụ idozi ihe oyiyi na ndụ ma nwee ihu ọhụụ nwere ike ịbịanye na nyochaa (gụnyere mkpuchi olu). Ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze dị njikere ikwu "ọ bụ enyi nke ma ọ bụ ihe ọmụma banyere .."Na-eche na ndị mmadụ ga-akwụsị inwe obi abụọ.
Na ịchọrọ Julie, a na-akpọ oku dị ukwuu maka ịchọta nwa amaala. Nke a nwere ike ime ka mmekọrịta ọha na eze dị ukwuu ma tinye uche niile nke ndị mmadụ n'okwu a. O doro anya na onye omekome a gosikwara na ị ga-enwe ndina n'ike na ya, ị nwere ike were ya na anyị nọ ebe a ọzọ Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta hụ ihe, na iwu ọhụrụ (nakwa na Belgium) na onye ọ bụla nwere ike ijide ogologo oge ma ọ bụ weta ọgwụgwọ ọrịa uche (ma onye ọkachamara uche na-ewere nke a ma ọ bụ). Na Default.be akụkọ:
"Ụlọ ikpe mara onye ahụ ikpe ikpe maka afọ anọ maka mkpọrọ na ịkwa ohi." Ọ bụ otú ahụ ka ọ dị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ gara aga, na 30 June 2017, na Court Antwerp. Ma Steve B. agaghị n'ụlọ mkpọrọ n'ụbọchị ahụ. Onye ọka iwu obodo ahụ rịọrọ ka e jide ya ozugbo, mana ụlọikpe ahụ azaghị nke a.
B. nakwa rịọ nkwenye ya. N'ihi ya, ọ bụghị nke ikpeazụ, ọ nọgidere na-enwere onwe ya ruo mgbe a rịọrọ ikpe.
Nwanne nna ya na-agba akaebe na, ekele ya, a tọhapụrụ ya n'ọnọdụ ụfọdụ. "Onye na-agwọ ọrịa uche ya bịara ịgwa m okwu," ka nwanyị ahụ kwuru, bụ onye chọrọ ịnọgide na-amaghị aha ya. "Ọ hụghị Steve dị ka omempụ. Nwa okoro a chọrọ enyemaka, o chere. Ma ọ bụrụ na anyị nwere ike inye ya nke ahụ? Anyị mere nke ahụ. "
Na nke a ị nwere ike ugbuangwọtagụọ. Eleghị anya mgbe ikpe a gasịrị, ndị mmadụ ga-ekwenye na njedebe nke ntọhapụ mgbe ị na-edebanye akwụkwọ ikpe na ikpe (ọ bụghị karịa, ma naanị 1) ga-ekpe ikpe ma ọ bụ na agaghị ekpochi onye ọ bụla n'ụlọ ọgwụ. Na iwu dị otú ahụ nwere ike imetụta onye ọ bụla na idei mmiri nke mmetụta uche nke ndị mmadụ na-atụle (a na-enyo enyo) ikpe ikpe PsyOp.
Zaa ajụjụ na aha
Na ajụjụ site na aha "Ndi oru mgbasa ozi na ndi dere akwukwo ma ha na ere akuko PsyOp dika nke a na ihe ngosi TV?", Azịza ya nwere ike ịbụ naanị YES. O doro anya na mmadụ ole na ole nwere butter na isi ha, ma na nzaghachi, ndị ahụ nwere ụgwọ dị oke mma ma ọ bụ nwee ike ịkpọ onwe ha otu nde mmadụ na-enwe obi ụtọ niile ha chọrọ. Ị maghị; ị nweghị ike ịlele ya; ị pụghị iji mkpịsị aka gị rụọ ya ruo mgbe mmadụ biliri ma kpughee ihe niile n'ime. Otú ọ dị, ohere nke na nke a ga-eme bụ obere, n'ihi na ndị na-eso ya nwere ike ịbụ enweghị ihe ọ bụla. Ọzọkwa, akụkụ nile nke ọrụ Ọmụmụ Ọmịiko nwere ike ịbụ nke nwere ike iche na ọtụtụ ndị amaghị na ha bụ akụkụ nke akwukwo PsyOp.
Ismail Ilgun vlogger agha bụ nanị ihe iji gbochie ntaneti n'okporo ámá
Tags: ai, ANP, de, miri miri, deepfakes, nkịta, agba, film, ihe nkiri ihe nkiri, ihe ngosi ihe nkiri, GAN, John, Mo, arụ ọrụ, arụ ọrụ, ndị na-emepụta ihe. psyop, uche, script, software, na, tv, wag
Ihe omuma atu nke a (dika dika) PsyOp, Thijs H.
Onye ọzọ nọ ebe a:
(ihe mgbaru ọsọ: a ga-amachibido ngwá agha niile, gụnyere obe)
Ọbụna ozi ndị ọzọ na-adịbeghị anya iji kwado iwu a malitere?
John.S dere, sị:
Kedu ihe ị chere banyere nke a, klas mbụ PsyOp:
N'ezie a akụkọ ọzọ, dị ka Sam G ọbụna rapaara ruo ụbọchị atọ ọbụna! Mgbe ahụ bọmbụ ahụ ga-agbapụrịrị na nke a na-atụ ụjọ na onye ọrụ ugbo mara ọkwa banyere ya, ọ dịghị ụzọ ọzọ, a ghaghị ịmara ya.
Ma ọ bụghị mgbe ahụ, ị ​​ka na-enweta ọhụụ ọhụrụ na ọnụ ụzọ niile na ndị dị otú ahụ ma ọ nwekwara bọtịnụ mkpuchi
ndị mmadụ na-eme ọtụtụ ego, anyị achọtala ugbu a
Ụlọ ọrụ RtvUtrecht na-ebipụta akụkọ akụkọ PsyOp n'oge na-adịbeghị anya. Ha siri ike na ya ma gbalịa iduhie ndị na-agụ akwụkwọ.
N'ezie ezigbo isiokwu ọzọ.
Amaokwu ikpe ikpeazụ dị oke mkpa.
Ihe na-abịa n'ebe a na saịtị a bụ vidiyo nke onye na-agwọ ọrịa na-eme ka ndị mmadụ kwenye na ụmị na-egbu egbu na-atọ ụtọ dị ka mango ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ.
Onye nlekota ahu maara nke oma na nke ahu abughi eziokwu, ma onye ogwu ahu ga - ekwenye n'ezie na o na - eri mango di nma ma na - aga n'ihu ikwu na ya na - eri mango di nma n'ihi na o kwenyere n'ezie
Maka usoro ndị a bụ "nkwụsị bara uru" nke a pụrụ iji.
Ya mere, ị nwere ndị na-aṅụ ọgwụ na ndị na-aṅụ ọgwụ ma ọ bụ ndị na-ejikọta ha abụọ.
Ọ dị mma ịgụ na ị ga-anọ ruo nwa oge, ihe na-aga ngwa ngwa ugbu a ka ịchọta ihe doro anya nke na-abịanụ bụ ihe dị oké mkpa.
O bughi na okwu a bu ihe kwesiri ya, nwa okoro ahu n'egwuregwu ha na ndi ozo na ndu ya.
Israel Hacking the World, ị ghaghị ịnwa.
Ee, ekwenyesiri m ike. Ihe ojoo nke ike n'emeghi ihere.
Edere akwukwọ agha, a kpachapụrụ anya na-agbazi akwụkwọ ma mechie (akwụkwọ nke agbakwunyere)
Olee otú o si dị mfe? ede ederede maka iwu dị mkpa maka ike. Ndị otu a na-amụba na ọnụ ọgụgụ buru ibu, ndị na-ahapụ akụkọ akụkọ Faber dịka ozi ọma.
nkeji 1-12.47 na nchịkwa a dị elu >>>>>>>>>>
Ugbu a, anyị nọ n'etiti ọwụwa anyanwụ na ọ bụ ezie na ihe ndị ahụ na-aga ugbu a, mgbanwe ahụ
ihe ọmụma ugbu a dịkwuo mfe ma rụọ ọrụ nke ọma site n'enyemaka nke ngwaọrụ dị iche iche na ụzụ ma ndị mmadụ
n'akụkụ dị iche iche nke ụwa nwere nkọwa dị iche iche banyere onye na-alụ ọgụ banyere onye .......... ndị bụ ndị so na ya? ............... ..
Ya mere, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịghọgbu ndị mmadụ gbasara ihe ndị na-eme n'ihu ha, lee ka ọ ga-esi dị mfe iji ghọgbuo ha banyere ihe 100 nke atọ nke afọ gara aga.
020 msm fumbling! ozi ọma
Ọ dị mma na-egosi na mpempe akwụkwọ banyere ihe nkiri vidio miri emi na Putin. Nke a bụ ihe ọzọ, ma site na mgbasa ozi kachasị:
Ndi mmadu ji nwayọọ nwayọọ na-akwadebe maka telivishọn a ma ama?
12 June 2019 na 19: 29
Ụbọchị mara mma 9-11 Journaal Nederland
Iri na iri na otu, ma eleghị anya, ọ bụ PSY-OPP mara mma? Na ịnapụ Heineken, edemede dị mma
ma ugbu a, arịrịọ ndị ahụ nwere ike ịjụ ajụjụ banyere onye omeewu Holleeder na Het Parool, mara mma
" Oge iji wepu ebe a? Kwado 15-05-2019
Eziokwu kachasị mkpa adịghị adị? »
Nleta nile: 12.334.536